वास्तु शास्त्र अनुसार यी स्थानमा राख्नु होस् धन ! – Jagaran Nepal
वास्तु शास्त्र अनुसार यी स्थानमा राख्नु होस् धन !
वस्तु शास्त्रमा ,आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पैसा घरमा कस्तो ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले संधैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।यदि तपाई आफ्नो कमाईबाट आर्जित धनको राम्रो संचय गर्न चाहनुहुन्छ भने वस्तुशास्त्रमा बताइएका यी कुराहरुमा राम्रो ध्यान दिनुहोला । वस्तु शास्त्रका अनुसार घरको यी दिशामा आफूले कमाएको पैसा राख्दा राम्रो संचय हुने र दैनिक थप्दै जाँदा धेरै बचत हुनेछ । यसमा शास्त्र उल्लेख गरे अनुरुप आफूले कमाएको पैसा राख्दा फजुल खर्च समेत नियन्त्रण हुदैं जानेछ र कुनै पनि परिवार वा व्यक्तिले धेरै धन आर्जन गर्न सक्नेछन् ।
पूर्व दिशा:यदि तपाईहरु आफूले प्राप्त गरेको पैसा कुनै दराज वा अन्य लकरमा राख्नुहुन्छ भने ती चिजहरुलाई घरको पूर्वी दिशामा राख्नु फलदायी हुनेछ । यसरी संचय गरिएको पैसा निश्चित रुपमा वृद्धि हुँदै जाने छ । तपाईहरुले घरको पश्चिम दिशामा आफ्ना गरगहना अर्थात् बहुमुल्य वस्तुहरु राख्दा उत्तम हुनेछ ।
उत्तर दिशा:यदि तपाईहरुले आफूले पैसा ,गरगहना वा अन्य बहुमुल्य वस्तु राखेको दराज उत्तर दिशमा खुल्नेगरि राख्नु उत्तम हुनेछ । यसरि राखिएको यी चिजहरु कहीँले नघट्ने र समय बित्दै जाँदा बढ्दै जाने मान्यता रहेको छ ।
दक्षिण दिशा:यदि तपाईले पैसा सहित आफ्ना बहुमुल्य वस्तुहरु दक्षिण दिशमा राख्नु भएमा कुनै नोक्सान नहुने तर वृद्धि भने कुनै मात्रामा नहुने कुरा वस्तु शास्त्रमा बताइएको छ । त्यसैले दक्षिण दिशामा यी चिजहरु राख्नु उत्तम मानिदैन।
लकर:कुनै पनि समान राख्दा यसको प्रकृति अनुसार राख्ने गरिन्छ । यसरी तपाई कुनै अमुल्य चिजहरु लकरमा राख्नुहुन्छ भने उक्त लकर भित्र लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोला । धनकि देवी मनिएकी लक्ष्मीको तस्बिर लकरमा राख्दा ठुलो फलदायी हुने र धन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने मान्यता रहेको छ ।
दक्षिण पूर्वी दिशा:यदि तपाईको घरमा धन सँग सम्बन्ध रहेका केही बहुमूल्य वस्तु छन् भने त्यस्ता वस्तुहरु आफू प्राय बस्ने गरेको ठाउँ बाट दक्षिण पूर्वी दिशमा राख्नुहोस जसले तपाईको जीवनलाई ठुलो लाभ पुर्याउने छ ।